ဂါထာ မရွတ်တတ်တဲ့ နတ်သမီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂါထာ မရွတ်တတ်တဲ့ နတ်သမီး
ဂါထာ မရွတ်တတ်တဲ့ နတ်သမီး
Posted by Iris on Aug 11, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 28 comments
ငါဟာ အတောင်ပံ တစ်စုံတောင်မှ ပိုင်ဆို်င်ခွင့် မရှိခဲ့တဲ့ အိန်ဂျယ်
လိုတရ နှင်တံ ငါ့လက်ထဲက လွတ်ကျ ပျောက်ရှနေဆဲလေ
ကယ်တင်ခြင်း တပ်မ လည်း ငါမပိုင်ဆိုင်လေတော့
ဂတိ ရဲရဲ ငါမပေးရဲခဲ့ဘူး
အပ်ချလောင်း အုံဖွ ဂါထာတွေ ရွတ်ဖတ်
မင်း မနက်ဖြန်တွေ လှပစေဖို ့
ငါ ဟာဖန်းဆင်းရှင် နတ်ဖုရားမ တပါး မဟုတ်လေတော့
မင်း အိမ်မက်တွေ မင်းကိုယ်တိုင်ထုဆစ်ရလိမ့် မယ်
မပြည့်ဝ သေးတဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံ အတွက် မင်း အားမငယ်ပါနဲ ့
ဂါထာ မရွတ်တတ်တဲ့ ဒီနတ်သမီး တစ်ယောက်
(ဒီဆန်းဒေးမှာ ဟိုရေး ဒီရေး လျှောက်ရေးလိုက်ပါသည်)
လိုတရ နှင်တံပျောက်လဲ ဂါထာ မရွတ်တတ်တဲ့ နတ်သမီး မှာ စွမ်းအား ရှိတဲ့ ဖေးမပေးမဲ့ လက်တစ်စုံ ပိုင်နေတာ မြင်လိုက်ရတယ်။
အဲဒါက လိုတိုင်းရနိုင်တာထက် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလားဘဲ။
ကျေးကျေးပါ အရီး. မုန် ့ဝယ်ကြွေးမယ်ဆိုတာ အခုထက်ထိမှတ်ထားတုန်း.
ခေါင်းစဉ်ပျောက်နေလို ့ဆြာသမား တစ်ယောက် တပ်ပေးထားတာ. ကျေးကျေးပါ အဲ့ ဆြာကိုရော.
လိုတရ နှင်တံ ထက် တူတူလျှောက်နိုင်တဲ့ အားမာန်ပါ ခြေတစ်စုံ ကိုပဲ ပို တန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့ မစ်စတာ ရိုက် နဲ့ ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေ လဲ့လဲ့ ရေ။
ဒီကဗျာလေး ဖတ်ပြီး ဘီရွန်းစေးရဲ့ ဟေလို သီချင်းလေး နားထဲကြားယောင်လာတယ်။
သူများ ကဗျာတွေ ဖတ်ပြီး နဲနဲ အရူးထကြည့်တာ။ ဘီယွန်းဆေး ရဲ့ ဟေလို ကို ပြန်နားထောင်လိုက်တယ် ခိုင်ဇာပြောလို့။ နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းကောင်းလေးပါပဲ။
အဲလိုလူတွေရဲ့ပိုစ့်တွေ စတစ်ကီရတတ်တယ်ဆိုလို့ စမ်းသပ်တာလားဟင်
ပြီးတော့ အရင်တင်ထားတဲ့ပို့စ်သုံးပုဒ်ပြန်ဖတ်သွားကြောင်း ..
ဟဟ။ ဟုတ်တယ် ခရစ်။ကျမလည်း ခုမှအဲ့ ပို့စ်သွားပြန်ကြည့်ရင်းတွေ့တာ။ အံ့မခန်းတိုက်ဆိုင်မှုပါပဲ။ ဒီမနက် အကြောင်းအရာတစ်ခုစဉ်းမိတာနဲ့လျှောက်ရေးလိုက်တာ ။ကဗျာ ရယ် ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အားပေးတာကျေးဇူးပါ။
ဖက်လိုက်စမ်းပါ ခရစ်လေးရယ်..ဦးကြောင်ကြီးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်… မဖက်ရင် ဆြာမ လဲ့ဂလေးနဲ့ ဦကြောင် အခြစ်ကဗျာတွေ ရွတ်ပစ်မှာနော်….
ဦးကြောင် ကဗျာရွတ် ရင် “ညောင်ညောင်” လို့မအော်နဲ့နော်။ ကျမ တိုက်ဂါး ခေါ်ပလိုက်မှာ။ ဪတိုက်ဂါးဆိုတာ က ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ဘောလုံးကန်တတ်တဲ့ အိမ်လုံတဲ့ ကျမ ဘော်ဘော်ပါ။ မေမေ ငါးကိုင်ရင် ဦးကြောင် အမျိုးတွေ အနားလာထိုင်ပြီး တညောင်ညောင်နဲ့ ပါးစပ်ပြဲပြီးအော်ကြတာ။ မေမေ စိတ်မရှည်တော့တဲ့အခါ တိုက်ဂါး ကိုလမ်းခေါ်စစ်ကူတောင်းရတယ်။ “တိုက်ဂါး လာစမ်း ဒီကောင်တွေကိုခေါ်သွားစမ်းဟယ်” လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အမြီးနှံ့နှံ ့နဲ့ရောက်လာပါလေရော။ ပြီးရင်ဂုတ်ဆွဲချီသွားပြီး လမ်းမပေါ်ချခဲ့ရော။
(မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါရှင် ကျမ မှာ တိုက်ဂါး လို့ခေါ်တဲ့ ဘောလုံး ကန်တတ်တဲ့။ လယ်ကြွက်ဖမ်းတတ်တဲ့ ချစ်စရာ ဆတ်စလူးခွေးတစ်ကောင်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ သူ့အတွတ်အမှတ်တယပါ)
အမုန်းစာရင်းမှာ နောက်တိုး +1
ဟိုရေးဒီရေး ရေးလိုက်တဲ့ကဗျာက ကာရန်ရော စာသားပါ ကောင်းပြီး အဓိပ္ပါယ်တွေလည်း ပြည့်ဝနေတော့…..
အသေအချာရေးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လောက် ကဗျာပြခန်းကို ပို့လိုက်ရင်……… :smile:
ဟာ- မမ ကလဲ လူကို ငယ်ထိပ် ခေါင်မိုးကပ်အောင်လုပ်နေပါပြီ။ ခိုင်ဇာက ဘာမှပြောဘူးရယ်။ ;) တကယ်ပြောတာ ကျမ က စာဖတ်ပရိတ်သတ် သတ်သတ်မျှသာ။ ကာရန်တွေ တက်ခ်နစ်တွေ မသိဘူးရယ်။ စိတ်ထဲပေါ်တာလျှောက်ရေးတာ။
Now the duties to ask for poems are by A Lin Set, Ta Gyar and Mon Mon..
Khwi khwi Khwi..
အန်တီ လီ ရေ
ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ လေးရော
ကဗျာ လေးများ ပေးပို ့ကူညီပါဦးနော်
ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့် . . .
Help me, sissy..! Help me..!
ထပ်ရေးပါဦး လီလီကျဲ့ရေ… :harr:
အလင်းဆက်။ ခိုင်ဇာ။ ဝေါင်း ရေ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဘယ်တော့ရေးဖြစ်မယ်မှန်းလည်းမသိဘူး။ ရေးဖြစ်ရင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းပို့လိုက်မယ်။
တပ်မတွေကော ရဲရဲတွေကော …ငအဒေါ်တော့ ဂဏန်းကြီးကို ကြွေသွားဘီထင့် ..
အဲ့လိုပြောမှပြောပ့မလားလို့ စိတ်ပူနေတာ။ ဟုတ်တယ် ကျမ က ဂဏန်းအရမ်းကြိုက်တာ။ လယ်ဂဏန်းတွေပြုတ်စားတာ။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်တိုင်တောင်ဖမ်းလိုက်သေးတယ်။ အင်းဒါမေပဲ့ အကောင်ကြီးတဲ့ ဂဏန်းကို ၂ခါလျှောက်ခိုင်းဘူး။ ညီတူညီမျှ ဆက်ဆံတာ အကုန်လုံးကိုတုတ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော. အိုးထဲထည့်ပြုတ်ပလိုက်တယ်။ အဲ့ဂဏန်းကိုရော အဲလို လုပ်လို့ရသလားဟင်.?
ဘိုးဘိုးကြီးအံ က သင်ပေးဘာ့မယ် …
ဘိုးဘိုးကြီးအံ တားတားကိုရော တင်ပေးမှာရားဂျ
တားတားလည်း ဂါထာ အရမ်းရွတ်တတ်ဂျင်တာပါ
လဂါးဒေါ့ မဟုတ်မှန်းတိပဒယ် ပိုက်ဆန်ပေးမှာပါ။
တာမီးလေးဒွေ သီးဒန့် သင်ဒန်းမို့ဘာ …
သည်းခံဘာ ဒဂါဒေါ် .. ဟီးးဟီးးး
ဂါထာတော့ရွတ်ချင်ဘူး အံစားတုံးခေါက်နည်းတော့စိတ်ဝင်းစားတယ်။ ကျမ ကခေါင်းခေါက်စပါယ်ရှယ်။ ကြောင်တွေကိုခေါင်းခေါက်လာတာ။ ကိုယ်က အငယ်ဆိုတော့ မမရဲ့ ခေါင်းခေါက်တာ ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲတာ ခံရပြီးကြိတ်ငိုခဲ့ရတာ။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့ ကြောင်တွေ။ ခွေးတွေ ကို ခေါင်းခေါက်တာ။ ;)
မန်းဒေးညမှာ မန်းဒလေးသားတစ်ယောက် မန်းဂေဇက် မှာ မူးမူးနဲ့ မန့်သွားပါသည်။
“မပြည့်ဝနိုင်လွန်းတဲ့ မင်းရဲ့ ဆန်ဒ တွေကြောင့်
ပျင်းရိ ငြီးငွေ့ ဖွယ်ရာ ဒီလမ်းမတစ်လျှောက်မှာ.
ခုံဖိနပ်စီး တတ်တဲ့ နတ်သမီးတစ်ယောက်
မင်းကို ဖိနောင့်နဲ့ ပေါက်မယ်။”